al-Bashiir oo booqday koonfurta Sudan - BBC News Somali
al-Bashiir oo booqday koonfurta Sudan
4 Jannaayo 2011
Image caption Madaxweynaha Sudan Cumar al-Bashiir iyo Madaxweynaha Koonfurta Sudan
Madaxweynaha Sudan, Omar al-Bashir, ayaa sheegay inuu ka murugoon doono inuu arko Sudan oo laba waddan u kala go'da, haddii koonfurta ay u codeyso inay madaxbanaani qaadato.
Laakiin waxa uu sheegay inuu ku farxi doono in abuuritaanka laba qaran ay keenaan sida hadalka uu u dhigay nabad dhab.
Mr Bashir ayaa ka hadlayay booqashadiisi ugu danbeysay ee kuu tago koonfurta Sudan ka hor aftida lagu wado inay ka dhacdo toddobaadka soo socda.
Khudbad telefishinka looga sii deynayay si toos ah waddanka oo dhan ayuu ku sheegay in uu tixgelin doono rabitaanka dadka isla markaana uu taageeri doono horumarka koonfurta Sudan haddii ay go'aansato inay noqoto waddan madax banaan sagaalka bishan January.
Albaabka laga galo garoonka diyaaradaha ee magaalada Juba oo ah xarunta koonfurta Sudan waxaa ka soo laalaada halkudheg ay ku qoran tahay ku soo dhowow waddanka 193aad, taaso ah hubaasha in dadka koonfurta ee waddanka Afrika ugu ballaaran ay u codeyn doonaan inay ka go'aan woqooyiga ayna samaystaan waddan cusub.
Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee waddan cusub uu ka dhasho qaaradda Afrika wixii ka dameeyay markii ay Eritrea ka go'day waddanka Itoobiya sanadkii 1993dii.
Xaqiiqada ah in Sudan ay ku soo jirtay dagaal sokeeye 40 sano oo ka mid ah 55kii sano ee ka soo wareegtay markii ay madaxbannaanida ka qaadatay xukunkii gumaysiga saandkii 1956kii, waxay muujinaysaa in waddanku aanu marnaba mideysnayn. Waa waddan ay ku kulmaam dunida Carabta iyo Afrika isla markaana ay masiixiyadda garabka isku hayaan Islaamka, ayna deggan yihiin daraasiin kooxo qabaa'il ka kooban oo inta badan isku dagaala biyaha, daaqsinta iyo kheyraadka kale oo dalkaas ku yar.
Dadkii Sudan soo xukumi jiray waxay xoog badan iyo awooddooda milateri ku bixiyeen sidii ay waddanka isugu hayn lahaayeen. Sidoo kalana dadka doonaya inay goostaan ee reer koonfureedka ah, qabaa'ilka ku dhaqan gobolka Darfur ee galbeedka iyo jabhado ka jira bariga Sudan waxay gaashaanka ku dhufteen in laga xukumo magaalada Khartoum.
Madaxbannaanida koonfurta waxaa loo arkay mid aan laga fursan karin markii lagu heshiiyay in afti loo qaado taas oo qayb ka ahayd heshiis ballaaran oo sanadkii 2005tii lagu soo afjaray dagaalkii 2aad ee sokeeye ee dagaalladii waddanka Sudan soo maray.
Hase ahaatee sameynta waddan cusub oo deggan oo barwaaqo ah ma noqon doonto wax sahlan dadka xukumi doona koonfurta Sudan ee cusub-na waxay u baahan yihiin inay eegaan oo keliya dalka dhinaca bariga ka xiga ee Eritrea si ay u arkaan sida ay u adag tahay arrintaasi.